ILEMBE LIQALISE OWOKUHLOLELA ICORONA KWADUKUZA – Sivubela intuthuko Newspaper
uSomlomo kamasipala waKwaDukuza uPhumlile Zulu behlola isikhungo okuzohlolelwa kuso igciwane I Corona Vrus
UKUNYUKA kwezibalo zabatheleleka ngegciwane iCorona Virus kuphoqe ukuba kuhlolwe umphakathi ukuze kunqandeke ukubhebhetheka kwegciwane. uSomlomo kamasipala waKwaDukuza uPhumlile Zulu wethule lolu hlelo ngokusemthethweni njengoba kuzoba khona isikhungo esingumahamba nendlwana kanye nezinsiza zokuhlolela leligciwane okusatshalaliswa kwisifunda iLembe.
UZulu wethule isikhungo okuzohlolelwa kuso esingumahamba nendlwana nezosetshenziswa ukuhlola kuyo umphakathi waseLembeni. Lolu hlelo luzosiza kakhulu ekutholeni abathelelekayo ngalegciwane nangesikhathi okwenzeka ngaso.
USomlomo uphinde waveza ukuthi ” Lokhu kuzosiza umasipala Kanye nendawo yaKwaDukuza yonkana, njengoba abantu abanezimpawu bezohlolwa ngokushesha.”
UZulu unxuse abasebenzi boMnyango wezeMpilo ukuba lesikhungo basiphathise okwezikhala zamantungwa ukuqinisekisa ukuthi sisesimeni esikahle noma sekudlule lolu bhubhane ukuze siqhubeke nokuhlolela ezinye izifo ezithathelanayo.